नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङ बाहिरिएसँगै विद्युत् कटौती हुने क्रम बढ्दै गएको छ । जसका कारण अहिले आम मानिसमा पुनः लोडशेडिङ हुने त हैन भन्ने त्रास शुरू भएको छ ।
एकातिर विद्युत् प्राधिकरणबाट उज्यालोका अभियन्ता बाहिरिनु त अर्कातिर विद्युतीय उपकरणका साटो इन्भर्टर, जेनेरेटरजस्ता सामग्रीको खरिदबिक्री बढ्नु, नेपाली उखान ‘बाघ कराउनु र बाख्रा पनि हराउनु’ भनेजस्तै ।
यही कारण आम उपभोक्तामा अहिले त्रास छ । तिहारकै समयमा पनि बत्ती जाने त हैन भन्दै उपभोक्ता सशंकित भइरहेको अवस्थामा लोकान्तरकर्मी परिवर्तन देवकोटाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग कुराकानी गरेका छन् ।
तिहारको समय छ, यसबीचमा विद्युत्को व्यवस्थापन कसरी गर्दैहुनुहुन्छ ?
विगतमा जस्तो अहिले तिहारको समयमा धेरै विद्युत् खपत नहोला भन्ने हाम्रो अनुमान छ । अहिले उद्योग कलकारखाना तथा होटल रेस्टुरेन्टहरू पनि बन्द छन्, जसकारण उपभोक्ताका लागि पर्याप्त बिजुली उपलब्ध हुन्छ । हामीले केही समस्या आउन नदिन र आइहालेमा तत्कालै समाधान गर्न इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टीम बनाएर राखेका छौं ।
तिहारको समयमा बत्ती जान्छ कि जाँदैन ?
तिहारमा बत्ती जाने कुरै छैन । मर्मत सम्भार तथा सटडाउन गर्ने काम तिहारमा रोकिन्छ । तर अप्रत्याशित घटना घटेर बिजुली रोकियो भने त्यसका लागि इमर्जेन्सी टीम स्ट्याण्डबाइ राखेका छौं । त्यसकारण तिहारका लागि समस्या छैन । यस वर्षको तिहार झिलिमिली तिहार हुन्छ नै ।
पछिल्ला केही महिनादेखि अहिलेसम्म पनि घोषित तथा अघोषित दुवै रुपमा विद्युत् कटौती हुँदै आएको छ, किन यस्तो भइरहेको छ ?
‘जंगल छउञ्जेल जंगलभित्रका कुरा नदेखिने, जंगल मात्र देखिने, जंगल नभइसकेपछि भने त्यहाँका स–साना कुराहरू पनि देखिने’ भनेको जस्तो हो यो । २/३ वर्षअगाडि धेरै लोडशेडिङ भएको समयमा चाहिँ साना–साना कुराहरू देखिएन । अहिले लोडशेडिङ नहुँदा त्यो देखिएको छ । विस्तारै हामी विद्युतमा अभ्यस्त हुँदै गयौं, त्यसकारण एकपटक बत्ती जाँदा पनि त्यो ठूलो कुरा बन्ने भयो ।
काठमाडौं उपत्यकामै पनि अघिल्ला वर्षहरूमा र अहिलेको वर्षमा जम्मा कति अपग्रेड भए र कति सटडाउन भए भन्ने तथ्यांक हेर्दा पनि योे बढेको देखिँदैन ।
मनोवैज्ञानिक असर हो यो । एकैछिन बत्ती गए पनि लामो समय गएको जस्तो लाग्ने भएको छ । यो बत्ती जाने आउने क्रम प्राविधिक सुधारका कारण हुने गर्छ, यो अघिल्ला वर्षहरूमा पनि भएकै थियो ।
पछिल्लो समय विद्युत्को लोड बढिरहेको छ । अहिले नबढेपनि अब लोड बढ्छ भन्ने धेयका साथ काम भइरहेको छ । गत वर्ष काठमाडौं उपत्यकाको पीक लोड ४ सय ५० मेगावाट थियो । यो वर्ष पनि पीक लोड ४ सय ५० मेगावाट नै पुग्छ । कोरोनाका कारणले होटल, उद्योग व्यवसाय बन्द छन् । तर त्यो भनिरहँदा हामीले तयारी भने लोड बढ्छ भनेर नै गरिरहेका छौं । जहाँ–जहाँ लोड बढी हुन्छ, त्यहाँ फिडरहरू थप्नुपर्ने हुन्छ । ट्रान्सफर्मर बदल्नुपर्ने हुन्छ । अन्य उपकरणहरू पनि बदलिराख्नुपर्ने हुन्छ । यही काम गर्ने क्रममा लाइन काट्नुपर्ने वा सटडाउन गर्नुपर्ने भइराखेको छ ।
हामीले विद्युत् प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त राख्नका लागि क्वालिटेटिभ इम्प्रुभमेन्टमा ध्यान दिएका छौं । गत वर्षबाट शुरू भएको अन्डरग्राउण्ड केबलिङको काम पनि भइरहेको छ । त्यसकारण लाइन काटेर हरेकपटक मर्मत गर्नुपर्ने काम आउँछन् ।
कुलमान घिसिङको बहिर्गमनपश्चात धेरैजसो समय बत्ती जान थाल्यो । यो संयोगमात्रै हो कि केही विशेष कारण पनि छन् ?
उहाँ हुँदा पनि र अहिले पनि विद्युत् प्रवाहमा केही समस्या रहिरहेका हुन्छन् । उहाँ हुँदा त्यो नदेख्ने र उहाँ जानेबित्तिकै बढी देखिने हो भने त्यहाँ साइकोलोजिकल कुरा पनि हुन्छ । प्राकृतिक समस्याहरू पनि काठमाडौं उपत्यकाकै कुरा गर्दा धेरै देखिन्न । तर इम्प्रुभमेन्ट गर्ने काम भने बढिरहेको छ । २०/२५ वर्षदेखि काम गर्दै आएका मेसेनरी वस्तुहरूले अहिले धान्नै नसक्ने अवस्था पनि हुँदैछ ।
त्यसलाई त फेर्नुपर्छ । हो, त्यो फेर्ने क्रममा लाइन सटडाउन त गर्नै पर्ने हुन्छ । एकैपटक त्यो काम सकिँदैन । दिउँसो काम हुँदैन । राति अलिकति काम गर्‍यो, अनि बिहान छोपछाप पार्‍यो, अनि फेरी पछि काम गर्‍यो निरन्तर चलिरहन्छ । त्यसकारण लोड बढ्दै गर्दा अहिले सटडाउन बढी भएको जस्तो लाग्छ । एउटा सानो काम गर्दा पनि १०/१२ पटक सटडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
सटडाउन लिँदा हामीले हरेक सबस्टेशनमा रेकर्ड राखेका हुन्छौं । सूचना पनि निकालिएको हुन्छ । त्यसमा हामीले चेक गर्न सक्छौं । विनाकारण कसैले सटडाउन गरेर राखेको छ कि भनेर हामीले हेर्न पनि सक्छौं । त्यसकारण अनावश्यक वा विना काम सटडाउन गरिएको हैन ।
एक दिनमा एउटा लाइनमा ३ सय /४ सय मिटर काम गर्न सकिन्छ । त्यसपछि बेलुका फेरि रिकभर गर्ने र बत्ती पठाउने । भोलि फेरि त्यस्तै । यसकारण दिनहुँ लाइन काट्नुपर्ने अवस्था आयो ।
अर्को भनेको, सडक विस्तार र पोल सार्ने कामले पनि सटडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी पुराना जम्परहरू बदल्न पनि सटडाउन गर्नु पर्छ । ट्रान्सफर्मर ओभरलोड भएमा पनि सटडाउन गर्नुपर्छ । यसमा पनि २/४ घन्टा लागिहाल्छ ।
बत्ती जाने क्रम बढेसँगै विद्युतको विकल्प खोज्न थालिएको छ, बजारमा इन्भर्टर, जेनेरेटर वा अन्य सामग्रीको कारोवार उच्च हुन थालेको छ । अब यसलाई कसरी बुझ्ने ?
शुरूमा मलाई पनि शंका लागेको थियो । अरूलाई पनि शंका लाग्यो । विशेषगरी कोरोनाका कारण यस्ता सामग्रीको कारोवार बढेको रहेछ ।
म आफैंले फील गरेको छु, मेरै घरमा पनि राखेको छु र साथीहरूको घरमा पनि राखिएको मैले बुझेको छु । यसको कारण भनेको, बालबच्चा, विद्यार्थीहरूका लागि अनलाइन क्लास, वर्क फर्म होम गरिरहेको अवस्था छ ।
जहाँ यूपीएस भएन भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ । सबैले बिजुली पहिले बत्ती बाल्न, खाना बनाउन वा केही गर्न हुन्थ्यो होला । २ घन्टा बत्ती नजाँदा त्यसलाई असर पर्दैन । तर अहिले सबै काम घरबाटै गर्दा त असर पर्ने भयो, यसरी यस्ता सामानको कारोबार पनि बढ्यो ।
जनमानसमा एउटै चिन्ता छ, अब फेरि लोडशेडिङ हुन्छ कि ! अब प्राधिकरणको यस्तो कामलाई बुझ्ने कसरी ?
कसलाई जस दिने कसलाई नदिने ? जस दिनेभन्दा पनि अहिलेको अवस्था हेर्दा बढी राम्रो होला । अहिले निजी क्षेत्रको ५० प्रतिशत र भारतबाट पनि प्रशस्त विद्युतको बाटो बनिरहेको छ । त्यसकारण अहिले हामी ७/८ सय मेगावाट विद्युत् आयात/निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । यो भनेको सिंगै नेपालको अहिलेको लोड हो । अहिले जाडो महिनामा पीकलोड १४ सय मेगावाट पुग्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ ।
जलविद्युतको क्षेत्रमा अरू केही काम नै नभएपनि अर्को ५ वर्षभन्दा बढी समय विद्युतमा समस्या आउँदैन । अहिलेको समस्या भनेको लोडशेडिङ कुनै हालतमा होइन । अहिलेको समस्या त विद्युतको कसरी उपभोग गर्ने भन्ने हो । पहिले हामी गर्जो टार्न कनिका जोगाउँथ्यौं भने अब यो कहाँ कसरी बिक्री गर्ने वा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरातर्फ हामी जानुपर्छ । त्यसकारण म आम उपभोक्तालाई भन्छु, कुनै हालतमा लोडशेडिङ हुँदैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अबको चुनौति भनेको गुणस्तर वा स्तरीयता हो ।
कुलमान गएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीमा पनि काम गर्ने जाँगर नचलेको र कतै–कतै विनाकारण लाइन काट्ने वा अन्य समस्या देखिने गरेको चर्चा चल्न थालेको छ नि !
कसैले नियतवश त्यस्तो हल्ला गरे होलान् । यस्तो हुँदै होइन, कसैले मिडियामा आएर त्यस्तो बोले होलान् तर व्यवहारमा त्यस्तो हुँदैन ।
अन्त्यमा, झ्याप्प झ्याप्प बत्ती जाने कहिलेसम्म हो ? र यो कहिले रोकिन्छ ?
यो लोडशेडिङ होइन । मर्मत तथा लाइनहरूलाई सुदृढ गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसकारण अहिले सटडाउन भएपनि भोलिका दिनमा सटडाउन गर्न नपर्ने अवस्था ल्याउन लागि परेका छौं ।
उपभोक्ताहरूले बुझेर नै यस्ता कष्ट सहिदिनुपर्छ । सटडाउन भइराख्ने समस्याको दीर्घकालीन समाधान क्रमिक रुपमा घट्दै जाने हुन्छ । आज जेजति लोड छ, त्यो लोड नबढ्ने हो भने केही गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर लोड बढ्दै गइरहेकाले हामीले क्रमिक सुधार गरिरहेका हौं । यसका लागि केही समय लाग्छ ।
मंगलबारदेखि जलजला पाटनमा ७ जना बेपत्ता
यस्ता छन् शाकाहारी बन्नुका फाइदा
भुइँमा सुत्दाका फाइदा, यो पढेपछि शायद ओछ्यानमा सुत्न छोड्नुहुनेछ
नयाँ तलवमान कार्यान्वयन गर्न नसकिने
च्याउ खोज्न जाँदा हात्तीले लियो ज्यान